दलालको फन्दामा परी भारत हुँदै कुबेत बेचिन पुगेकी अनु तामाङ नेपाल फिर्ता ! - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
दलालको फन्दामा परी भारत हुँदै कुबेत बेचिन पुगेकी अनु तामाङ नेपाल फिर्ता !
प्रकाशित : शनिबार, साउन ०४, २०७६०८:२० पब्लिक आवाज /संवाददाता
पछिल्लो समयमा यसरी गैरकानूनी रुपमा विभिन्न प्रलोभनमा विदेश जाने र बिचल्लीमा परेपछि सरकारलाई हारगुहार गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
महिला मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै भारत, म्यान्मा, कुबेत र साउदी अरब लगायतका देशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका ३११ जना व्यक्तिलाई उद्धार गरी नेपाल फिर्ता गरिएको छ ।
मलेसियाको एर्पोट्मा काम गर्ने कामदार बोकेको गाडी दुर्घटना, २ नेपाली सहित १३ को मृत्यु ! [ फोटो फिचर ]
अमेरिकामा २ बर्षीय नेपाली बालक गाडी भित्र मृत फेला !
सडक दुर्घटनामा परी मलेशियामा दूई नेपालीले ज्यान गुमाए !
वैदेशिक रोजगारीमा वर्षौं काम गरेर रित्तैहात फर्किने नेपाली
साउदीमा नेपाली युवकलाई मृत्युदण्ड !